Ogaden News Agency (ONA) – Caalamka oo Si kulul u Canbaareyay Taliska Zenawi iyo Xukunka Wariyaasha Ree Sweden.
Caalamka oo Si kulul u Canbaareyay Taliska Zenawi iyo Xukunka Wariyaasha Ree Sweden.
Taliska Ethiopia ee madaxda uu ka yahay kaligii taliye Zenawi ayaa canbaareyn kulul caalamku usoo jeediyay kadib markii maxkamad kutaala magalada Addis Ababa ay si sharciga caalamka ka baxsan ay xukun ugu riday laba wariye oo u dhashay wadanka Sweden. Labada wariye ayaa laga soo qabtay dhulka Ogadeniya ayaga oo baadhitaano ka wada ay ku daba jooggeen shirkadaha shidaalka iyo tacadiga Gumeysiga Itoobiya ku hayo shacabka Somalida Ogadeniya.
Wadanka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay war saxafadeed uu kaga hadlayo wariyaasha sida sharci darada ah ugu xidhan taliska Ethiopia ku sheegay inay dowlada Ethiopia ay xidhay laba wariye oo u dhashay wadanka Sweden oo kasoo waramayay dhulka Ogadeniya. Waxa aan Taliska Ethiopia aanu horey ugu sheegnay markii aanu kala xaajooneynay arrimaha xuquuqul insaanka in xoriyada saxaafadu tahay asaasiga demoqradiyada. warsaxafadeedka mareykanku ku dhaleecayay dowlada Ethiopia waxa uu daba socday oo taagero u muujiyay dowlada Sweden oo iyana si kulul uga hadashay xukunka labada wariye
Raisal wasaraha wadanka Sweden ayaa isagu si kulul u canbaareyay xukunka labada wariye waxa uuna si kulul u sheegay in si dhaqso leh ay dowlada Ethiopia u sii dayso labada wariye oo aminsanahay inay shaqadoodii gudanayeen. Waa in lasii daayo si ay labadaas wariye reerkoodii ula kulmaan sida ugu dhaqso badan.
Xukunka labada wariye ayaa waxa dowlada Ethiopia ay kusoo beegtay xilli dadka heysta diinta Kiristianku ay u dabbaal dagayaan Kirismaska xillilgaas oo ah xilli ay ehelada iyo qarabadu isasoo booqdaan. haddaba dowlada Ethiopia oo aad ugu xumeynaysa dowlada Sweden ayaa xukun ku rogtay labada wariye ay ku sheegeen inay danbi ku heleen labada wariye midkaas oo xadhigoodu noqon karo 15 sanno oo xabsi ah. Dhamaan qaadiyadi maxkamaduna waxa ay isku raaceen in labada wariye ay ahaayeen danbilayaal u addeegayay argagaxiso.
Waalidka iyo asxaabta labada wariye oo uu weheliyo safiirka sweden ee Addis Ababa ayyaa ka baxay goobtii maxkamada markii xukunku dhacay ayyaga oosan la hadlin saxaafada.
Jonas Nordling oo ah Gudoomiyaha midowga saxaafada Sweden ayaa xukunkan labada wariye ku sheegay in ay tahay iskuday dowlada Ethiopia kaga hortageyso in baadhitaano lagu sameeyo xadgudubyada ay dowlada Ethiopia ka geysato dhulka Ogadeniya. Waxa isaga oo hadalkisa sii wata uu yiri xukunkani waa xukun siyaasi mana jiro wax caddeyn ah in labada wariye danbi ay galleen. Labada wariye si sharci ah oo waafaqsan nidaamka suxufiyiinta ayay ku howlgalayeen.
Nordling waxa uu sheegay in dowlada Ethiopia aysan rabin si madax banaan in loogaso waramo dhulka Ogadeniya oo ay rabbaan in caalamka oo dhan ay ka awdaan.
Waxa kale oo si kulul uga hadlay dhamaanba midowga suxufiyiinta ee caamka ka jira illaa heer gobol. Xukunkan ayaa noqday mid wariyaasha caalamka oo dhan ay si qotto dheer daba gal ugu hayeen ulana socdeen xaalada labada wariye iyo nidaamka aan sharciga aheyn ee lagula dhaqmay wariyaasha.
Hayada Xuquuql insaanka ee Amnesty International ayaa sidoo kale war saxaafadeed kasoo saartay ay dowlada Ethiopia ku dhaleecaysay uguna baaqday inay sii dayso wariyaasha una fasaxdo dhulka Ogadeniya saxaafada.
Sidoo kale waxa xidhaygan ka hadlay Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo ku tilmaamtay xukunka wariyaasha mid lagu cabsi galinayo wariyaasha. Sidoo kale waxa Jabhada ONLF ay ka hadashay beesha caalamka ee falalka danbi kusii taagersan gumeysiga Ethiopia.
Haddaba xukunkan labada wariye waxa uu xidhiidhka labada wadan ee Sweden iyo Ethiopia oo markii horeba ahaa mid aad u liitay uu gaadhsiiyay heer aad u hooseeya. Dolwada Swedena waxa caddaadis badan uga yimid Suxufuyiinta midowga Sweden iyo guud ahaanba shacabka Ree Sweden oo arrintan u arka in aysan dowlada Sweden sidii loogu talo galay uga howlgalin. Waxaana horey loogu eedeyay wasiirka arrimaha dibada ee Sweden innuu kamid ahaa maamulka Lundin Petrolium oo ah shirkad baadha shidaalka saamina ku leh ceelasha shidaalka ee Ogadeniya.
Dadka quburada ah ee indho indheeya siyaasada Geeska Afrika ayaa ku tilmaamay xukunka wariyaasha Sweden ficil doqonimo ah oo ay dowlada Ethiopia gaadhay. Waxa uu ka horkeenaya wadamada Ree galbeedka sidoo kale waxa uu sare u qadaya qadiyada somalida Ogadeniya oo helaysa waji cusub oo beesha caalamku ku eegto.
Waxa hadda ka hor ay dowlada Ethiopia xidhay wariyaal ka socday New York Times taas oo ku noqotay dhabar jab taliska Ethiopia. Kadib markii warbaahinta caalamku soo bandhigtay tacadiyada gumeysi ee lagu hayo somalida Ogadeniya.